Ingcebiso ekhawulezileyo: Umphathi weThegi kaGoogle > UVielhuber uDavid
Ingcebiso ekhawulezileyo: Umphathi weThegi kaGoogle06
Umphathi weThegi kaGoogle uzinzile ngokwendlela esemgangathweni yokuhlanganiswa kwezikripthi zokulandela umkhondo. Ngale ndlela, kwelinye icala, uxanduva (ukuthengisa kwi-Intanethi ngokuchasene neenkqubo) zahlulwe ngokucocekileyo kwaye kwelinye icala, ungaseta ngokukhawuleza kwaye uguqule ukulandela umkhondo ngejelo lokuhambisa elongezelelweyo. Nazi iingcebiso ezimbini ezincinci zokuseta ezibangela.
Xa usenza i-trigger, umntu uhlala ekhetha ukhetho "Match and CSS selector" as a trigger type. Umzekelo, ukuba ufaka ixabiso .foo .bar .button , kuhlala kwenzeka ukuba i-trigger ayibangeli ngokuthembekileyo. Isizathu soku sihlala siqhubeka ukuba izinto ze-HTML (umz. <span> Izinto zokongeza isitayile) zinokufihlwa ngaphakathi kweqhosha. Ukuba ucofa ngokuthe ngqo kwezi zinto zomntwana, i-trigger ayitshisi -umnyhadala awusasazwanga phezulu kulawulo lwe-DOM (alubhuzwanga). Ukuthintela oku, phinda isikhethi kwaye ungeze isikhethi sendalo yonke "*". Kumzekelo wethu, ibinzana liphela ngu .foo .bar .button, .foo .bar .button * .
Njengengcebiso yesibini, bekukho isimilo esiphazamisayo kwisikhangeli se-Safari ukusukela nge-iOS 10.2 (ukuya kuhlobo lwangoku): Ukuba ulandela i-mailto: amakhonkco, lo myalezo ulandelayo uvela phantsi kweemeko ezithile emva kokucofa ikhonkco:
Nalu uhlobo lwenqaku " Cofa - Amakhonkco kuphela " yenziwe yasebenza ngenketho " Lindela iithegi ". Oku kulibazisa ukwenziwa kwelona nqophiso lekhonkco, elikhokelela kumyalezo okhankanywe apha ngasentla. Emva kokukhubaza ukhetho, ingxaki ayisenzeki. Ngenye indlela, ungasebenzisa uhlobo oluqala " cofa- zonke izinto " kwaye ucacise ithagethi ngokuchanekileyo njengekhonkco usebenzisa isikhethi seCSS.